musha nyika dzakabatana NFL Vatambi Aaron Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Aaron Rodgers Biography inokuudza chokwadi nezve ake ehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Edward Wesley Rodgers naDarla Leigh Pittman Rodgers), Mhuri, Hukama (Olivia Munn, Danica Patrick naShailene Woodley).
Moreso, mutambi wemitambo Siblings (Jordan Rodgers naLuka Rodgers), Hupenyu Hwega, Mararamiro, Mari uye net kukosha.
Kuita mupfupi Biography yedu, tinokupa iwe mufananidzo wakazara weHupenyu nhoroondo yaAaron Rodgers.
Iye mukwikwidzi wenhabvu weGreen Bay Packers weNational Soccer League (NFL). Nyaya yedu inotanga kubva pakuzvarwa kwake kusvika ave simba muNFL.
Kuti urodze rudo rwako rweBiography yedu, isu tinopa iyo gallery nzira yezviitiko zvakatenderedza nhoroondo yehupenyu hwaAaron Rodgers.
Pasina mubvunzo, mifananidzo yaunoona pazasi inopfupisa nhoroondo yehupenyu hwemutambi.
Iyo gallery nzira yehupenyu hwehupenyu hwaAaron Rodgers kubva pakuberekwa kusvika mukurumbira.
Ehe, ndiye mumwe weakanyanya uye ane tarenda quarterbacks nguva dzese. Rodgers, mukuwedzera, muhwina wenguva ina weakanakisa NFL Vatambi ESPY A.
Zvisinei nekurumbidzwa kwake, vashoma vanoda Mitambo vakaverenga chidimbu cheAaron Rodgers Biography.
Naizvozvo, isu tazviona sezvakanaka kuti tikushandire iwe inonakidza nyaya yaAaron Rodgers. Zvakare, iko kuparara kwechiitiko chake chemitambo kusvika parizvino. Zvino, pasina kunonoka, ngatitangei.
Aaron Rodgers Nyaya Yehudiki:
Kutanga, Aaron Charles Rodgers akasvika pasi pano pazuva rechipiri raZvita 2. Akazvarwa Chishanu chakatendeka kuna Darla Leigh Pittman Rodgers nababa vake, Edward Wesley Rodgers.
Yedu nhoroondo yeAmerica yakazvarwa muButte County, California, iro rine vanhu vakawanda rinozivikanwa seChico. Zvakare, Aaron Rodgers akazvarwa pakati pehama dzake mbiri (Jordan Rodgers naLuke Rodgers).
Rodgers aive wechipiri paEd naDarla Rodgers 'vanakomana vatatu. Ivo vese vakatorwa kubva kumubatanidzwa wababa vavo, Edward Rodgers naamai, Darla Rodgers, vane mifananidzo yatinoratidza pazasi.
Tarisai Aaron Rodgers Vabereki - amai, Darla Leigh Pittman Rodgers uye baba, Edward Wesley Rodgers.
Bhora raive rudo rwekutanga kuna Rodgers. Vabereki vake vakamurera muSuamico, Wisconsin, sabhubhu yekuchamhembe kweGreen Bay ingangoita mamaira gumi kubva kuLambeau Field, kusvika 10.
Pavaviri, aigona kugara akanyarara achiona mutambo weNFL wese. Anotarisa San Francisco 49er mitambo.
Pamakore mashanu, aigona kutora dzakasiyana nhabvu mafomu paTV skrini. Iye aigona zvakare kukanda nhabvu kuburikidza netambo yakarembera.
Semunhu anoda zvemitambo, akatora chikamu mubaseball apo mhuri yakatamira kuBeaverton, Oregon. Zvakare mutambi ane tarenda, akaratidzirwa kuchikwata chake cheRaleigh Hills Little League.
Mufananidzo wehudiki waAaron Rodgers.
Aaron Rodgers Mhuri Yayo:
Iyo yeAmerican nhabvu quarterback ndeyemhuri inoshanda nesimba yepakati-kirasi. Baba vaAaron, Edward Wesley Rodgers, vaiva chiropractor.
Aigona kugovera zvinodikanwa zvinokosha zvezvipfeko, pokugara, uye zvokudya zvinovaka muviri. Mumba maRodger waigara zvakanaka.
Aaron Rodgers Mhuri Kubva:
Yedu Yehudiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi ichave isina kukwana pasina kutaura nezve midzi yemhuri yaAaron Rodgers.
Iyo NFL Star chizvarwa cheChico, guta riri kuchamhembe kweCalifornia. Guta racho rine nzvimbo dzakawanda dzinonakidza. Iyo inochengetera hombe Bidwell Park.
Nekudaro, baba vaAaron, Edward Rodgers, ndewemarudzi akasanganiswa. Iye wedzinza reChirungu, chiIrish neGerman hunhu. Asi ipapo Ed akaberekerwa muUnited States of America. Saka, nerudzi, iye muAmerican.
Nezvese izvo kusvika zvino, Aaron Rodgers akafanana neMusanganiswa wedzinza sababa vake.
Kunyange zvakadaro, isu tinofungidzira ake eChirungu, maIrish neGerman Ancestors ndisekuru nasekuru nasekuru. Takaratidza pikicha pazasi kuti tinzwisise zvakadzama.
Mufananidzo uyo unoratidza Mhuri yaAaron Rodgers.
Aaron Rodgers Dzidzo:
Uyezve, pana Aaron Rodgers Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi, Rodgers akapinda Oak Manor Elementary Chikoro. Akadzidza ipapo apo mhuri yakatamira kuUkiah, California.
Saizvozvo, mushure mekunge mhuri yake yatamira kuBeaverton, Oregon, akabatana neVose Elementary School. Zvakare, akaenda kuWhitford Middle School. Semudzidzi, akatora chikamu mu baseball yeRaleigh Hills Little League munzvimbo dzakasiyana siyana.
Mhuri yake yakadzoka kuChico IN 1997. Aaron akatamba iyo pfupi, yepakati munda, uye chirongo. Mushure meizvozvo, akaenda kuPleasant Valley High Chikoro. Chikoro chine zita remadunhurirwa rekuti Vikings.
Kuona kwepamusoro uye kumberi kwePleasant Valley High Chikoro.
Achiri kutamba kuchikoro, akaita rekodhi-yemwaka mumwe aine 2,466 mayadhi akazara. Kunze kwekuve akasarudzika mutambi wenhabvu, Rodgers akatarisawo pamabhuku ake.
Akapedza chikoro chinoshamisa che1310 paSAT uye A- Avhareji. Kukoreji yake, Rodgers akaenda kuButte Community College uye University of California.
Aaron Rodgers Ekutanga Basa:
Basa remutambi wechidiki rakatanga achiri kuchikoro. Semunhu mutsva, akatungamira chikoro kuti awane makwikwi eNorCal Conference.
Aaron Rodgers zvakare akamiririra California Golden Bears. Ikoko, murairidzi mukuru, Jeff Tedford, akamuziva.
Akashamisika kunzwa kuti hapana rimwe rezvikwata zvekoreji rakatora Aroni kare. Nekuda kwerekodhi yakanaka yechikoro chesekondari yaAaron, akakodzera kutamira kuYunivhesiti yeCalifornia, Berkeley.
Aaron Rodgers - paakatamba nhabvu yekoreji kuYunivhesiti yeCalifornia, Berkeley.
Murairidzi akaisa Rodgers semutambi wekutanga mumwaka wa2003. Zvakare, seye sophomore kukoreji, akatungamira maGolden Bears, 7–3.
Zvinosuruvarisa, Aaron akatsiviwa muhafu yechipiri yemutambo naReggie Robertson nekuda kwekukuvara kamwe kamwe. Kupfuura kwemayadhi ake kwakamuita MVP muInsight Bowl mumwaka mumwe chete.
Rodgers akadzora timu kusvika 10-1 rekodhi achiri mugore rake rejunior. Moreso, zvakare chinzvimbo chepamusoro-shanu mumwaka wenguva dzose. Rodgers akabva aisa rekodhi rechikoro idzva rekupasa kwakazara makumi maviri nematanhatu.
Aaron Rodgers akapedza mwaka we2004 aine makumi maviri nematanhatu ekugunzva, masere ekubata, uye 24 anopfuura mayadhi. Mushure mekupedza mwaka we2,566, Aaron akasiya mwaka wake wepamusoro kuti apinde mu2004 NFL Draft.
Aaron Rodgers Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
VaSan Francisco 49ers vakasarudza quarterback Alex Smith. Chico wekuzvarwa aive nemazita anonakidza panguva yekoreji yake. Saka, akafungidzirwa kuti akasarudzwa pamberi pa2005 NFL Draft. Zvisinei, vakamusiya.
Aaron akabuda seye 24th yakazara sarudzo neGreen Bay Packers. Siraidhi yaRodger kusarudzo yechimakumi maviri neina uye kusarudza kwaGreen Bay Packer kusarudza kuzotsiva kwaBrett Favre kwaityisa.
Zvakangodaro, Rodgers aive achiri wechipiri quarterback akasarudzwa.
Iyo Green Bay Packer QB, ichiratidza hunyanzvi hwake.
Muna 2005, Aaron akabvuma chibvumirano chemakore mashanu. Akapedza mwaka wake werookie se backup yechikwata. Kunyangwe hazvo Rodgers akatamba mumitambo mishoma, akakwanisa kutungamira chikwata chescout panguva yemapracticals.
Zvizhinji gare gare, Green Bay Packers yakatsiva Mike Sherman nemurairidzi mutsva. Murairidzi wake mutsva, Mike McCarthy, akatumira Aaron ku "Quarterback chikoro" chake maawa matanhatu pazuva uye kakawanda pasvondo. Pakupedzisira, hunyanzvi hwake hwakatanga kuve nani.
Hushamwari hwaAroni naFavre hwakakura panguva iyi. Zvinoshamisa kuti, Pazuva rechina raKurume 4, Brett Favre akazivisa kurega kwake. Sarudzo yake yakabvisa iyo Packers 'yekutanga quarterback chinzvimbo kuna Aaron mumwaka wa2008.
Nhamba dzaAaron dze4,038 yadhi dzakapfuura zvakakurumidza kuratidza kuti ndiye mumwe weakanakisa quarterbacks muNFL. Naiye semutambi, timu yakahwina ichipokana neMinnesota Vikings. Vhiki rakatevera, panguva yake yechipiri NFL kutanga, akave mubairo weFedEx Air kuburikidza nemavhoti.
Aaron Rodgers Biography - Kubudirira Nyaya:
Rodgers akahwina kuhwina kwake kwekutanga panguva yekudzoka. Akakunda NFC Inogumbura Player mu2009. Moreso, iyo Green Bay Packers yakaisa nyowani franchise rekodhi. Vakatyora rekodhi rekare rakagadzwa nechikwata cheSupp Bowl muna1996.
Aaron akabuda seyekutanga quarterback muNFL kukanda mayadhi e4,000 semutambi mumakore ake maviri ekutanga.
Kuita kwaRodger kwakasarudzika-mwaka wakawana mubairo nerwendo kuenda kuPro Bowl yake yekutanga seNFC yechitatu quarterback.
Muna 2011, Aaron akawana NFC Inogumbura Mutambi weMwedzi mibairo yeGunyana kusvika Mbudzi. Saizvozvo, aive FedEx Air Player yeVhiki katanhatu. Rodgers zvakare akabuda seyekutanga quarterback kubvira YA Tittle.
Aaron Rodgers achimira aine Super Bowl MVPs Trophy muna 2011.
Akakanda mamayadhi mazana mana nemakumi masere nemakumi mana emabatirwo asina kukanganiswa. Rodgers akawana iyo AP NFL Inonyanya Kukosha Mutambi wemwaka wa2014. Iye zvakare akagamuchira iyo NFC Inogumburisa Player yegore mubairo neKansas City Komiti ye101.
Pro Bowl yakasarudza Aroni mumwaka we2014. Nguva pfupi yapfuura, akave wechipiri-akanakisa mutambi muNFL Pamusoro 100 Vatambi ve2015.
Rodgers akabva agashira kudomwa kune yake yechishanu Pro Bowl uye akave wechitanhatu-akanakisa mutambi paNFL Pamusoro 100 Vatambi ve2016.
Shure kwaizvozvo, Aaron akasaina kuwedzera kwemakontrakiti emakore mana nePackers mu2018. Aaron akaisa mutambo wake wekutanga-wese mukati mevhiki 7 mu2019. Akabuda NFC Inogumbura Player yeVhiki yekuita kwake.
MunaGunyana 2021 Aaron Rodgers akatungamira Packers kuhwina kunonoka mugwagwa. Akapedzisa mutambo ne23 ye33 inokanda yemayadhi e261 uye maviri touchdowns. Ona clip iri pazasi yekukanda kwake kwakanakisa panguva yemutambo.
Danica Patrick Aaron Rodgers Nyaya:
Rodgers anonzi akange ari murudo rwekudanana kubva 2014 kusvika 2017 naOlivia Munn, mutambi weAmerica. Zvisinei, ivo vakarambana. Saka akaroora kwechinguva mushure mekuve naOlivia Munn.
Nguva pfupi yapfuura, Aaron akabva asangana naDanica Patrick. Ivo vaviri vakatanga kufambidzana. Danica Patrick muAmerican aimbova pro mujaho mutyairi. Akaendesa kuNASCAR panguva. Zvichienderera mberi, Patrick naRodgers kubva muna 2018 kusvika Chikunguru 2020.
Danica Patrick naAaron Rodgers kubva muna 2018 kusvika Chikunguru 2020.
Zvekare, hukama hwavo hwakapunzika. Danica anoti anozvinzwisisa zvirinani izvozvi kupfuura paakange achifambidzana naRodgers. Saka, ane yambiro kumukomana anotevera. Zvichiri kusingaperi, nehafu yechipiri ya2020, Aaron akasangana naShailene Woodley.
Iye Mutambi. Aaron Rodgers akavimbiswa kuroorwa naye. Sezviri pachena, akazivisa kubatanidzwa kwake musi wa6 Kukadzi 2021.
Akazvizivisa panguva yake yekugamuchira NFL MVP kutaura. Vese vari vaviri vave kupfimbwa uye varonga kuroorana.
Aaron Rodgers akavimbiswa Shailene Woodley, uye kuronga kuroora.
Aaron Rodgers Hupenyu Hwemhuri:
Vabereki vaRodger, Darla naEdward, vane nhabvu. Nhoroondo yavo inokweretesa kune chokwadi chekuti vese vatatu vana veRodger vane rimwe basa rebasa munyika yemitambo.
Kunyangwe vese vari vaviri Aaron naJorodhani vari vaviri vakatamba mhando yebhora rakarongeka kumusoro zvirinani kuburikidza nemakoreji koreji.
Kuti tinzwisise zvishoma nezve kumashure kwaAaron Rodgers, ngatitorei zvishoma kudzika mukati mehupenyu hwavo. Ngatione kuti ndezvipi zvinhu zvinozadza zvinyorwa zvavo zvekare.
Imba yaRodgers mushure memutambo - vabereki, vanasekuru nevana.
Zvizhinji Nezve Aaron Rodgers Baba - Edward Wesley Rodgers:
Baba vaAaron, Edward Wesley Rodgers, anodawo zvemitambo. Akanga ari mutambi wenhabvu mumazuva ake madiki. Ed akambotora chikamu munhabvu kuChico. Aimbove lineman aimbo gumbura. Nekudaro, akaridzira Chico State Wildcats kubva 1973 kusvika 1976.
Ed akatamba chipangamazano chaAaron uye mukomana webhora achiri mudiki. Ed akaratidza kufarira kwekutanga kunhabvu. Nekuda kweizvozvo, akapa Aaron nevakoma vake vaviri pfungwa yekujairika uye kujairana sezvavanenge vachienda kuchikoro.
Mufananidzo weChipatimendi Chiremba, Edward Rodgers.
Nehunyanzvi, Edward ane rezinesi Chiropractor. Unogona kuzvitenda here? Kuti achiri kushanda kunyangwe angangoita makore makumi masere? Edward Wesley Rodgers akapinda chikoro chemunharaunda. Saizvozvo, mushure mekupedza chikoro chesekondari, akatora chikamu kuChiropractic institution.
Kunze kwezvo, isu tinoziva Edward nekuda kwekuzvininipisa kwake, sezvo vanakomana vake, kusanganisira Luke Rodgers, Jordan Rodgers, naAaron Rodgers, vakaratidza kuve vanhurume.
Zvimwe Nezve Aaron Rodgers Amai - Darla Leigh Pittman Rodgers:
Kuva amai vevanakomana vatatu zvaisave rakareruka basa. Nekudaro, iwo ndiwo waive mugove waDarla. Mufaro wakadii waakaita basa hombe. Aida uye ane hanya zvakanyanya nevana vake. Darla akatsigira vanakomana vake vese munzira dzavo dzebasa.
Aaron Rodgers aigona kunge asina kuita zvakanaka pasina rudo rwake. Amai vaAaron, Darla Leigh Pittman Rodgers, akapedza kudzidza kuCalifornia State University (Chico).
Mufananidzo waamai vaAaron, Darla nemurume wake, Ed, naAaron Rodgers iye.
Fembera ndipo paakasangana naEd Rodgers. Darla aive nhengo yechikwata chekutamba kuyunivhesiti kuChico. Kutamba kwakabatsira kune inotapira tsoka tsoka Aaron Rodgers anoratidza mumitambo yake.
Ivo vaviri vachiri kunakidzwa nekambani inofadza uye vanochengetedza chisungo chakasimba mumubatanidzwa wavo wewanano nerudo uye kunzwisisa. Ivo vanoendawo pazororo rekushanya uye vanoongorora nzvimbo nyowani uye dzekunze pavanosangana nevanhu vatsva.
Aaron Rodgers Biography - Vanun'una:
Iyo NFL superstar ine hama. Mazita ehama dzake ndiRuka Rodgers naJordan Rodgers, zvichiteerana. Ivo vagara vachikwikwidza. Vatatu ava vanogara vachiedza kusimudzirana sezvo vaive vana.
Ivo vakura, uye matanda akawedzera. Mumwe munhu ari pedyo naAaron akambotaura kuti hama idzi dzakanga dzaita makwikwi kweupenyu hwose. The Mhuri yaAaron Rodgers yakavhura nezvenyaya yavo kutanga mu2016 uyezve nababa vavo, Ed mu2017.
Iyo rift yakave ruzivo rweveruzhinji muchirimo 2016 apo Jorodhani yakaonekwa paFletcher 'mwaka weThe Bachelorette. Zvakare, muhurukuro nababa vavo, Edward Rodgers. Isu takapa vhidhiyo pazasi nezve Rodgers hama' feud.
Pane chiratidziro, Jordani akaburitsa pachena kuti paanenge ari padhuze naRuka, chimwe chinhu chakaparadzanisa Aaron kubva kune vamwe vemhuri. Parizvino, vane ruzivo rwakagovaniswa. Ngatitaurei nezvazvo mumwe nemumwe.
Zvimwe Zvakawanda nezvaAaron Rodgers Hama - Luke Rodgers:
Mwana wekutanga waEdward & Darla ndiLuke Rodgers. Aive murume akakosha mukukunda kwaPacker's 2010 Super Bowl XLV. Aaron Rodgers 'Mukoma rekodhi inomira pa100 inokunda makumi mashanu nenomwe kurasikirwa. Saizvozvowo, ane touchdown-to-interception ratio ye57, iyo ndiyo yakanakisisa muNFL.
Luke Rodgers ndiye maneja director wekusimudzira bhizinesi kuGigaMonster, kambani yezvekufonera. Akavaka kambani yekutengesa mitambo yemadhora mamiriyoni gumi. Luke Rodgers anga ari muongorori weNFL weCBS Sports.
Mufananidzo wemukoma waAaron, Luke, nababa vavo, Ed.
Akafambawo pasirese, achigara mumusha wenherera muThailand, achivakazve guta rakaparadzwa nemadhaka muPhilippine, uye kusefa muAustralia. Iye zvino ane mapurojekiti akati wandei mumabasa, kubva papodcast yake yemitambo nemukoma wake Jordan.
Luke zvakare muridzi-muridzi weboka reNashville yekupedzisira frisbee timu, iyo Nashville Nightwatch. Ari kugadzira podcast ine zvidimbu zvekuve murume uye muchinda. Neumwe neumwe, ane chinangwa chimwe chete: kubatana nevamwe uye kuita mutsauko pasirese.
Akaroora Aimee Wathen pazuva rechinomwe raKubvumbi 7 muNashville, Tennessee, mushure mekuroorana muna Chikunguru 2019.
Luke Rodgers akaroora Aimee Wathen pa7th zuva raApril 2019.
Zvizhinji Nezve Aaron Rodgers Mukoma - Jordan Rodgers:
Mukoma wechipiri waAaron Rodgers ndiJordani Rodgers. Iye ndiye gotwe Ed & Darla mwana. Jorodhani kwakazvarwa pazuva re30th yaNyamavhuvhu 1988. kusvika zvino; Iye muongorori wezvemitambo weAmerica - zvakare aimbova koreji uye nyanzvi muAmerican nhabvu quarterback.
Jorodhani raitamba mukudzidzira uye preseason squads. Akaridza Tampa Bay Buccaneers uye Miami Dolphins. Uye zvakare, akatambira iyo BC Shumba muCanada Nhabvu Nhabvu.
Jorodhani akazobatana nemumwe wake wenguva yakareba, Jojo Fletcher. Iwo mweya vanyowani vachakurumidza kuchata. Munun'una waAaron, Jordan, nemukomana wake, Jojo, vakatenga pekugara muDallas, Texas. Nzvimbo yavo yekugara ingangoita 1,550 mativi tsoka.
Munin'ina waAaron, Jordan, ari kuita nemurume wake wenguva yakareba, Jojo Fletcher.
Zvizhinji nezve Aaron Rodgers Hama:
Iyo yekumhanyisa-inogadzirisa NFL mutambi ane hama. Kunze kwababa vake, amai, nevanin’ina vake. Aaron Rodgers ane vashoma vemhuri yakawedzera. Ane vana sekuru, vana sekuru, vazukuru, varamu nasekuru.
Saka nekudaro, Aaron Rodgers ane hama uye anogovera yakawanda nguva navo. Sekuru nasekuru vake vaive Edward Wesley Rodgers Sr uye Kathryn Christine Odell. Nekudaro, kwete zvakawanda zvatinoziva nezvavo.
Aaron Rodgers Hupenyu Hwega:
Achibva kure nebasa rake, Aaron anonakidzwa nezvimwe zvinhu zvakawanda. Mutambi weNFL anoda kuona mafirimu. Aigona kushanyira Sundance kuti adzitungamirire. Aaron Rodgers anofarira kuridza gitare negorofu. Mukuwedzera, anofarira kutamba baseball.
Aaron, aka "A-Rod," ane zvemitambo anovaka uye anoda chipfuwo. Kukura, Rodgers akakura semuKristu. Mukukura, zvakadaro, anoti haachazvibatanidzi nechero chitendero chakarongeka. Aaron Rodgers anozivikanwa kwazvo nemacheche ake.
Aaron anofarira kutamba nembwa yake, parutivi rwegitare rake.
Zvakare, maitiro ake endebvu anga aine shanduko huru. Kudya kwake kutsva kunosanganisira nyama tsvuku nehuku. Zvakare zvakare, akacheka huwandu hwezvigadzirwa zvemukaka kubva mukudya kwake. Pasina kupokana, ane mutoro wemashizha egirini akasvibira mundiro yake.
Anobatana nevateveri vake vari kukura kuburikidza nevezvenhau. Rodgers anogovera mafoto kubva pakudzidziswa kwake, zvidimbu zvemabasa ake uye zvinouya zvitsva. Chico wekunyika ari kushanda pa Instagram, Twitter, Facebook neYouTube. Tinogona kusvika kwaari kuburikidza newebhusaiti yake.
Aaron Rodgers Mararamiro:
Ichokwadi kuti kukudzwa kwaAaron Rodgers kusvika parizvino kwakamuunganidzira hupfumi hwakawanda. Zvisinei, anodzora zvaanoita nemari yake. Zvinonzi, akaunganidza Dzimba muMamirioni emadhora.
Ane dzimba mbiri dzinoyevedza, imba yepahombekombe mamaira makumi maviri kuchamhembe kwedhorobha reSan Diego uye anoshanya panguva yeOff-Mwaka. Iye anoshandisa Tim yake mumasabhabhu anowanikwa neGreen Bay anenge mamaira gumi kusvika kuMunda weLeaeau.
Aaron, pamusoro pezvo, akatenga furati muMalibu, California, ne $ 28 Million. Imba ine makamuri mana ekurara, mana ekugezera pane 4,636 mativi tsoka.
Mugaraji rake unogona kuona mota dzevagadziri vakaita seMustang, Ford uye Tesla. Iye zvakare muridzi weChevrolet Camaro uye 8 miriyoni Mercedes-Benz Maybach Exelero.
Vatambi veNFL Vepamusoro-Vakabhadharwa 2018: Aaron Rodgers Anotungamira Nemadhora 76 Miriyoni
Sekureva kweMukurumbira Net Kukosha, Aaron anotora mari inobhadharisa mari inosvika $ 120 Million, inopfuura hupfumi hwaDavante Adams. Parizvino ari muchibvumirano che $ 134 Million neGreen Bay Packers '. Iye ane avhareji anotambira ye $ 33.5 Million.
Iyo mibairo inosanganisira $ 57.5 Million (kusaina bhonasi) uye $ 98.7 Million (zvivimbiso zvese). Zvinonzi, maererano neForbes, iyo American Quarterback ndeimwe yeiyo Vatambi veNFL-vanobhadharwa zvakanyanya mu2018 Na $ 76 Million.
Rodgers anewo zvibvumirano zvekubvumirana nemakambani akasiyana akadai seAdidas, Panini, State Farm Mutual Auto Insurance, Bose uye Prevea Healthcare.
Uyezve, Aaron Rodgers ndiye zvakare mumiriri wechiratidzo cheWatchmaker, Zenith. Zvakangodaro, iye zvakare ane rake diki diki muNBA's Milwaukee Bucks. Nekuda kweizvozvo, ivo vari kumuita iye wekutanga anoshanda mutambi ane NBA franchise muridzi wedanda.
State Farm kushambadzira:
Aaron Rodgers akatora chikamu muState Farm yekutengesa. Akaratidzira padivi peKansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes. Pamwe chete, ivo vanoonekwa kwechikamu chechitatu-chechipiri mune imwe nzvimbo ine hunhu hunonzi "Jake kubva kuHurumende Farm."
Munguva yekutengesa, Aaron akatamba kutora nembwa achitaura nezve inishuwarenzi. Zvakare, iyo yekutengesa yakaburitswa panguva yeNFL Kickoff Game pakati peMadzishe neHouston Texans.
Aaron Rodgers Untold Chokwadi:
Kunze kwemashoko ari pamusoro apa, pazasi pane zvishoma zvinoyemurika chokwadi chingafadza fancy yako nezveiye Super Bowl anokunda uye kaviri MVP yeNFL, Aaron Rodgers.
Chokwadi # 1: Saizi yaAroni:
Kunyangwe mushure mekodhi inonakidza yechikoro chaRodger, akadhirowa kushoma kubva kune vanotora basa. Zvinonzi, akataura kuti kuwanikwa kushomeka kwekutora basa kwaive nekuda kwehukuru hwake husinga shamise semutambi wechikoro chepamusoro.
Aroni aive 5'10” (1.78 m) uye 165 lbs (75 kgs). Uyezve, Butte Community College muOroville yakamutora kuti atambe nhabvu.
Chokwadi # 2: Kukuvara:
Mushure mekukuvara kwebendekete nekuda kwekurova kwaAnthony Barr, Rodgers aifanira kuenda nekuvhiyiwa kwecollarbone yake yakatyoka. Pazuva rechi19 raGumiguru, akaenda nekuvhiyiwa kwakange kuri pamutemo panzvimbo yakakuvara zuva raitevera.
Huwandu hwe13 screws dzakaiswa kutsigira collarbone yake. Zvakangodaro, Aaron akasaina chibvumirano chemakore mana nePackers muna 2018.
Chokwadi #3: Biography Mabhuku akatevedzana:
Mune rake Aaron Rodgers 'Nhabvu Biography Mabhuku akateedzana, Clayton Geoffreys anoongorora nyaya dzinokurudzira dzevatambi venhabvu. Kukunda kwavo, kukundikana kwavo, uye nzendo dzavo dzekuva vatambi vavari nhasi.
Mabasa ake anonyora kurerwa kwaAaron Rodgers, basa rake reNFL, uye nhaka yake pamutambo wenhabvu yehunyanzvi.
Chakafukidza pikicha chaAaron Rodgers 'Nhabvu Biography Mabhuku akateedzana, naClayton Geoffreys.
Kunyangwe iwe uchitsvaga nhabvu yebhuku renhabvu kupa chipo kune yako yemitambo fan kana kungoda nzwisiso yakadzama yezvinoita kuti Pro-Bowlers ive yakanaka, iyo Nhabvu Biography Mabhuku akateedzana ndeako.
Yakakwana kune vateveri veNFL veese mazera, Clayton Geoffreys 'nhepfenyuro inoongorora nyaya dzevatambi vakaita se Tom Brady, Russell Wilson, Patrick Mahomes nevamwe.
Chokwadi # 4: Njodzi!
Muna 2015, Rodgers aikwikwidza paMukurumbira Njodzi! Akakunda Shark Tank investor Kevin O'Leary, muchadenga, uye ramangwana Senator weUS Mark Kelly, achigamuchira madhora zviuru makumi mashanu zverudo rwake.
Pakutanga kwa2021, Rodgers aive nemavhiki maviri stint semuenzi wevaenzi paNjodzi! kubva Kubvumbi 5-16. Akateedzera futi seJeopardy! Gadzirira chikamu cheThe Conners.
Muna 2015, Rodgers aikwikwidza paMukurumbira Njodzi!
Chokwadi # 5: Mhemberero Sitaira:
Kubva pakuva quarterback-starter mu2008, isu takaziva Rodgers nezve rake rakasarudzika touchdown mhemberero. Iye nevamwe vake vakadana mutambo uyu se "Championship Belt."
Mushure mekukunda, Rodgers anopemberera nekuita kufambisa sekunge ari kuisa bhandi remakwikwi asingaonekwe muchiuno chake.
Icho chiito chakakwevera chinoshamisira cheWorld Wrestling Entertainment wrestler Triple H. Zvave zvakajairika kune vateveri veGreen Bay kutevedzera panguva yemitambo.
Chokwadi # 6: Charity:
Rodgers anobatanidzwa mumasangano akati wandei anobatsira uye zviitiko zvekuunganidza mari, mutsigiri wenguva pfupi yapfuura weThe MACC fund. Munguva yake ye2021 kutaridzika seJeopardy, akakwidza madhora zviuru makumi mashanu muchikamu, achipfuura dzimwe nyeredzi seAstronaut Mark Kelly weMACC Fund.
Rodgers anotsigira alma mater yake, iyo University of California, Berkeley. Vane tarenda quarterback vakapa mari yekumutsiridza zvivakwa zvemitambo.
Pamusoro pezvo, akatangawo bhezari rekuchinjisa vadzidzi pachikoro ichi. Muna 2021, chikoro chakamukudza nekuda kwebasa rake rekubatsira.
Aaron Rodgers Biography Pfupiso:
Fungidzira iwe uchadzidza zvakawanda nezve Aaron Rodgers 'nyaya uye biography chokwadi. Rodgers ndomumwe wevatambi venhabvu vemuAmerica. Kutenda kune hunyanzvi hwake uye mutambo wekutamba, akabata zvisingaite zvikwiriso. Tevera kuburikidza netafura pazasi.
Zita rizere: Aaron Charles Rodgers
Zita rekudanwa: A-Tsvimbo
Zuva rekuzvarwa: 2nd Zuva raZvita 1983
Nzvimbo yekuzvarirwa: Chico, California, US
Dzidzo: Pleasant Valley High School uye University of California, Berkley.
Baba: Edward Wesley Rodgers
Amai: Darla Leigh Pittman Rodgers
Hama: Jordan Rodgers naLuke Rodgers
Musikana: Olivia Munn (2014), Danica Patrick (2018) uye Shailene Woodley (2020).
Vana: Jeada (b. 2013); Aaron Junior (b. 2016)
Hama: sekuru nasekuru (Edward Wesley Rodgers Sr. naKathryn
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Sagittarius
Hobbies: Mabhaisikopo, Baseball, kurovedza muviri, kutamba gitare uye gorofu.
kukwirira: 6 ft 2 mu (1.88 m)
Muhoro: $ 33.5 Million
Net Worth: $ Miriyoni makumi maviri (120)
Dzinza / Race: African American
Isu tinotarisira kuti iwe wakadzidza zvidzidzo zvishoma mukuputira Aaron Rodgers's Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu. Aaron Rodgers akaunza kutarisisa kwepasirese kunhabvu yeAmerica neNFL.
Vazhinji vatambi venhabvu nevatambi vanofunga kuti Rodgers ndiye mumwe weakakura uye ane tarenda makota enguva dzese. Rodgers zvakare akahwina-nguva ina kuhwina Akanakisa NFL Vatambi ESPY Mubairo.
Pasinei nebasa rake rinonakidza, akachengetedza pfungwa yeFocus par kugona. Iye akatevera kuburikidza neiyo mwero wekugona kuburikidza nebasa rake rakaoma. Anoenderera mberi achidaro kuburikidza nedzidziso yake. Zvakanaka, ndinotenda zvakare nerutsigiro ruzere rwemhuri yake.
Aaron Rodgers aigona kudzidza pasina nguva izvo zvaizotora vamwe kwenguva yakareba. Tinotenda kuti iwe wawana iyi Biography inonakidza. Nyorera kune zvimwe zvehucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography chokwadi neyekutanga-kirasi mhando.
Dai 5, 2022